Uru na ọghọm dị n'ịzụ ihe n'ịntanetị: Echiche ndị ahịa | ECommerce ozi ọma
Uru na ọghọm dị n'ịzụ ịntanetị
Maka ndị ahịa na ndị ọchụnta ego, ịzụ ahịa n'ịntanetị nwere ọtụtụ uru na ọghọm ma e jiri ya tụnyere azụmaahịa ọdịnala. Mana ndị ahịa na ndị ahịa na-ahụkwa ụfọdụ uru na ọghọm mgbe ha na-azụ ngwaahịa ma ọ bụ na-arụ ọrụ site na Internetntanetị.
N'ezie, ụfọdụ atụmatụ a na-ahụ dị ka eCommerce uru maka ndị ahịa na-aghọta dị ka ọghọm dị na ndị na-ere ere.
1 Nyochaa uru na ọghọm dị n'ịzụ ịntanetị
2 Uru nke ịzụta n'ịntanetị
3 Kọ ihe ụfọdụ nke ịzụta online
4 Uru nke eCommerce maka ndị ahịa na-emerụ ndị na-ere ahịa
Nyochaa uru na ọghọm dị n'ịzụ ịntanetị
Mgbe ị na-atụle ịmepụta azụmahịa ma ọ bụ mgbanwe nke nke dị, ọ dị mkpa ịtụle uru ndị ụlọ ọrụ bara na uru ndị ahịa nwere. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-adị mfe karị ịtụle mgbalị a na-aghaghị ime jiri uru ndị ahụ wee mee ihe ọghọm na eCommerce nwere maka ndị ọrụ na ndị ahịa.
Ọ bụ ya mere n'okpuru anyị ga-eji chịkọta ọtụtụ ndepụta yana uru na ọghọm dị n'ịzụ ịntanetị.
Uru nke ịzụta n'ịntanetị
Ọnọdụ ndị a chere uru maka ndị ahịa ma ọ bụ ndị na-ere ere, na n’ọnọdụ ọ bụla, ha bụụrụ mmadụ nsogbu. N'okwu ndị a, otu abụọ a na - erite uru n'ịzụ na ire n'ịntanetị:
Enweghị ahịrị ịzụ
Tonweta ụlọ ahịa na ngwaahịa na ọnọdụ dịpụrụ adịpụ
Ọ dịghị mkpa ịnwe ụlọ ahịa anụ ahụ iji zụta ma ree
Nke a pụtara na ebe ụlọ ahịa dị adịghị mkpa maka ire ere
Enwere ike ịnye ma chọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nhọrọ
Storeslọ ahịa dị n'ịntanetị dị kwa ụbọchị n'oge elekere niile
Ike ịzụta ma resị ndị ahịa ndị ọzọ ma jiri uru C2C rụọ ọrụ
Purchasezụta ngwa ahịa ngwa ahịa dijitalụ (sọftụwia, e-akwụkwọ, egwu, ihe nkiri, wdg)
Mfe nke uto ma nyekwuo ngwaahịa na oru
Enweghi oke ma ọ bụ ọnọdụ nke oghere, nke na-enye ohere ịnweta ngwaahịa ndị ọzọ
Mfe na ọsọ na-ekwurịta okwu
Nhazi nke ịzụta na ahụmịhe ndị ahịa
Enweghị mkpa ijikwa ego
Mmekọrịta ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma
Ọ dị mfe ijikwa ngwa ahịa, ka ndị ahịa mara ozugbo ma ọ bụrụ na ihe ha na-achọ dị. Maka ndị na-ere ya, ọ bụkwa uru dị mkpa ịnwe ike mejupụta tupu ebuka agwụla
Mbelata nke ụgwọ ndị ọrụ
Ohere ịchọta ndị ahịa ma ọ bụ ịchọta ụlọ ahịa ka mma site na engines ọchụchọ
Ekwe omume nke na-azụ ma na-ere obere ma ọ bụ na-erughị ahịa ngwaahịa, ma na nwere ha ahịa òkè
Ike nyochaa ngwaahịa ahụ n'oge njem
Kọ ihe ụfọdụ nke ịzụta online
Ndị na-azụ ahịa na-ahụkwa ụfọdụ mgbaka nke na-ewute ndị na-ere ahịa na mgbe ụfọdụ ha na-ahụkwa dị ka ọghọm.
Enweghị nkwurịta okwu na mmekọrịta onwe onye
Enweghi ike ịnwale ngwaahịa tupu ịzụta ya
Need chọrọ njikọ intaneti echekwara
Ọ dị mkpa ịnwe ngwaọrụ iji jikọọ na connectntanetị
Egwu nke ịkwụ ụgwọ wayo, aghụghọ na izu ohi nke ozi nkeonwe (hackers)
Ihe isi ike ma ọ bụ ọbụna enweghị ike ịchọpụta aghụghọ na ndị ohi
Encedabere kpamkpam na .ntanetị
Enwere ụgwọ ndị ọzọ nke, n'ọtụtụ oge, ndị na-ere ahịa ga-ebu ya
Ahụ erughị ala maka nloghachi
Na-egbu oge n'inweta ngwaahịa (ọ dịkarịa ala otu ụbọchị)
Uru nke eCommerce maka ndị ahịa na-emerụ ndị na-ere ahịa
Ndepụta ikpeazụ a anyị na-egosi atụmatụ na ngwa ọrụ nke eCommerce nke ndị ahịa na-atụle dị oke mma yana nke ahụ, n'agbanyeghị, na-anọchite anya nnukwu ndọghachi azụ maka ndị na-ere ákwà.
Mfe na ọsọ iji tụnyere ahịa
Onyinye ego ego ego na onyinye pụrụ iche
Nyefee nke ngwaahịa ọ bụla n'otu n'otu
O yiri ka o doro anya na uru nke eCommerce karịrị karịa karịa ihe ndọghachi azụ, ma maka ndị na-azụ ma ndị ahịa. Iji nwee ihe ịga nke ọma na azụmaahịa dị n'ịntanetị, ndị ọchụnta ego kwesịrị iburu n'uche ọnọdụ ndị ahịa na-atụle ọghọm iji kwado usoro ịzụta ma bulie ahịa.
N'ọnọdụ ọ bụla, ndepụta ndị a kwesịrị ịrụ ọrụ uru eCommerce dị ka ohere azụmaahịa pụrụ iche ma were ya dị ka isi ọrụ, ọ bụghị nke abụọ ma ọ bụ nkwado maka azụmaahịa ọdịnala. Ọzọkwa, ka oge na-aga, a hụrụ na azụmaahịa mpaghara dị iche iche na-apụta dị ka nkwado na mgbasawanye nke azụmaahịa kọmputa.
Ihe meworo ka ọ pụta ìhè bụ na e nwere uru na ọghọm dị n'ịzụ ịntanetị. Ihe ekwesiri itule bu na ihe oma ndia kariri ndi ojoo ebe obu naani uzo ka ahia ji agam n’ihu na onye ahia ya imeju afọ na nzuta ha.
Ma gị, ịchọtala uru ọ bụla ma ọ bụ ọghọm dị n'ịzụ ahịa n'ịntanetị na anyi edepughi ebe a?
Ozi ndị ọzọ - Uru na ọghọm nke eCommerce ma e jiri ya tụnyere azụmaahịa ọdịnala
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Uru na ọghọm dị n'ịzụ ịntanetị
Kedu ka m ga - esi nweta nkwekọrịta n’usoro?
Ọ dị mma, ịzụrụ na ntanetị wee nweta ya na Canary Islands maka ugbu a, ọ ka bụ ọrụ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume.
N'ezie, uru nke azụmahịa e-commerce karịrị nke doro anya, mana nnukwu ọghọm bụ ma ọ bụ nwee ike ịbụ afọ nke onye na-azụ ahịa, ma a bịa "iburu ịga n'ihu na azụmaahịa ya" yana ndị ahịa ọ na - ejikarị. azụmahịa.
Zaghachi Javier Alberola Berenguer
Isi nsogbu m hụrụ bụ na na Spain enwere ọtụtụ ihe dị iche ma ọ bụrụ na ibi na peninshula ma ọ bụ na Balearic Islands ma ọ bụ na Canary Islands ... na nke ikpeazụ ọ bụ odyssey na na Balearic Islands na-eche oge bụ mgbe ụfọdụ ogologo.
Pinterest ma ọ bụ Instagram nke kachasị mma maka azụmaahịa gị?
Nkata na Ọrụ Ndị Ahịa